Inokosha zvakadii injini dzekutsvaga kune e-commerce saiti kushambadzira? | ECommerce nhau
Inokosha zvakadii injini dzekutsvaga kune e-commerce saiti kushambadzira?
Zvitsva zvekutsvaga Ndiwo anonyanya kushandiswa uye anonyanya kushanyirwa mawebhusaiti nhasi, saiti senge Google neBing, ndiwo masosi anowanikwa nemunhu wese kana avhura browser ravo. Uye nekupihwa izvi, aya masaiti ndiwo zvakanakira e-commerce webhusaiti kushambadzira. Uye zvino isu tinokuzivisa iwe kumatekinoroji akasiyana ekusimudzira a e-commerce saiti pane aya masosi ekutsvaga.
Aya ndiwo mazita emazwi echirungu ekuti "Tsvaga Injini yekutengesa", Iyo inoshandurwa muchiSpanish zvinoreva"Tsvaga Injini Kushambadzira". Iri ndiro izwi rakapihwa nzira yekusimudzira mawebhusaiti nekuwedzera kwavo kuoneka pane ekutsvaga saiti.
Semuenzaniso, kana iwe ukatsvaga saiti yekutsvaga seGoogle yezwi rinoti "Materevhizheni ari kutengeswa", E-commerce masaiti anotaridzika kutanga kwauri ndeavo vakaisa mari yekusimudzira mukati meaya mamwe masosi ekutsvaga.
Zvakare ndiwo mazita anoreva muChirungu "Tsvaga Engine Optimization", Izvo muchiSpanish zvinoreva"Tsvaga Injini Kugonesa", Uku ndiko kumira kwekuti nzvimbo dzekutsvaga idzi dzinopa webhusaiti, zvisinei nechinangwa chewebsite.
Iyi kuraira kwachinja mumakore achangopfuura, nekuda kwenhamba hombe yekuvandudzwa kwavakagamuchira, asi pasina kupokana izvi zvakakosha nekuti yako e-commerce saiti yakaiswawo zvichienderana maitiro maviri ayo SEO ine, izvo zvine chiremera, zvinoreva mukurumbira une webhusaiti yako, saiti ine mukurumbira uye kukoshesa kwakakwirira, ichaiswa pekutanga kupfuura vamwe, uye imwe nzira ndiyo kukosha kwenzvimbo iyi, izvi zvinosanganisira hukama hune webhusaiti ine yakapihwa yekutsvaga.
Yakazara nzira kuchinyorwa: ECommerce nhau » Marketing » SEM » Inokosha zvakadii injini dzekutsvaga kune e-commerce saiti kushambadzira?
Chii chinonzi CRM uye nei ndichiida iyo yangu e-commerce saiti?
Ndivanaani vatengesi vepasi rose?